466 May 12, 2015
ကရင်လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်အကြောင်း (တို့ပြည်တို့မြေ) “ဒါကတော့ ပညာစမ်းတာပဲလေ သူပညာ ဘယ်လောက်တတ်လဲ ကိုယ်ပညာဘယ်လောက်တတ်လဲ အမုန်းမရှိဘူးလေ ရှုံးရင်လဲပျော်ပျော်ပဲ နိုင်ရင်လည်းပျော်ပျော်ပဲ အပြင်မှာကျတော့လည်း ဒီလိုပဲပေါ့ လမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်ရတာပဲ ဘာရန်ငြိုးရန်စမှမရှိတာ”
တို့ပြည် တို့မြေ အစီအစဉ်မှ ဟင်္သာတို့ရဲ့မြေသို့……
563 May 7, 2016
တို့ပြည် တို့မြေ အစီအစဉ်မှ ဟင်္သာတို့ရဲ့မြေ၊ ရာမညဌာနေ… မွန်ပြည်နယ်ထဲ မော်လမြိုင်တ၀ိုက်က လူမှုဘ၀ပုံရိပ်တွေကို ရှုစားကြရမှာပါ။
DVB TV – တို့ပြည်၊ တို့မြေ ပန်းသည်ကလေးမအကြောင်း
1217 December 31, 2016
DVB TV – တို့ပြည်၊ တို့မြေ အဖွဲ့သားများ ကင်မရာနောက်ကွယ်မှာ အတွေ့အကြုံများ အပိုင်း(၃) ပန်းသည် ကလေးမအကြောင်း နှင့် တံငါသည်တစ်ယောက်အကြောင်းကို ရှုစားရကြမှာပါ။
ဖားကန့်နှင့် တောင်တန်းများ ချိုင့်ဝှမ်းများ …. ကျောက်စိမ်းမြေဆီသို့ (၄) – (၂၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄)
မြေလွှာကိုဖွင့် ပြည်ကိုမြှင့်အံ့…. ကျောက်စိမ်းမြေဆီသို့ (၄) ဒီဗီဘီရဲ့ အပတ်စဉ် ခရီးသွား #Roadshow အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ တို့ပြည် တို့မြေ အဖွဲ့သားများက ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် လုံးခမ်းတ၀ိုက်ကို အရောက်သွားပြီး ဒေသခံတွေရဲ့ စကား၊ လူမှုဘ၀ သဘာဝတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Doh Pyay Doh Myay အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် စနေ၊တနင်္ဂနွေ ညနေ ၅း၃၀ နာရီမှာ ဒီဗီဘီ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ အွန်လိုင်းချန်နယ်တွေမှာ ရှုစားနိုင်ပြီ။
983 January 2, 2016
ပိန်းချောင်း ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့ပိုင်း လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်တဲ့ နမ့်စန်မြို့၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောင်းကစားတွေနဲ့ နမ့်စန်မြို့ အနီးတ၀ိုက်က လူမှုဘ၀တွေအကြောင်း တင်ဆက်ထားတဲ့ တိုပြည်တို့မြေ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ DPDM 2.5 DVB TV – 02.01.2016
DVB TV – ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နှင့်အနီးတ၀ိုက် တို့ပြည် တို့မြေအစီအစဉ်
928 July 30, 2016
DVB TV – အညာမြေက သက်ကြားအို ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်မှု၊ ထန်းတက်သမား မိသားစုဘ၀ထဲက ကျောင်းသူမလေး၊ ပုပ္ဗားတောင်ကလပ်က ဈေးသည်မလေး စတဲ့ မန္တလေးတိုင်းေးသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်း အနီးတ၀ိုက်က လူမှုဘ၀ ပုံရိပ်တွေကို ဒီတပတ် တို့ပြည်တို့မြေ အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်
DVB TV – ချင်းပြည်နယ်၊ထန်တလန် မြို့ အနီးတဝိုက်
1981 March 18, 2017
DVB TV – ချင်းပြည်နယ်၊ထန်တလန်မြို့ အနီးတဝိုက်က လူနေမှု့ ဘဝတွေကို တို့ပြည် တို့မြေ အဖွဲ့သားများ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကယန်းမြေသို့ … (တို့ပြည် တို့မြေ – ၈ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄)
538 March 26, 2015
DVB TV -မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသမျိုးစုံက လူထုတွေရဲ့ဘ၀ကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ … တို့ပြည် တို့မြေ (ကယန်းမြေသို့ ….) အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၄